Dowladda Ingiriiska Oo Muwaadiniinteeda Uga digtay in ay usafraan dalka Masar.
16 Sano Kadib Ciidamada Mareykanka Oo dib ugu laabtay Wadanka Sacuudiga.
Tuesday November 06, 2018 - 09:39:28 in Wararka by Liibaan Jeexoow
sawir hore qarax AMISOM lagula eegtay Muqdisho
ilo wareedyo ayaa SomaliMeMo u sheegay in mid ka mid ah qaraxyada lala helay gaari Booyad ah oo ay wateen ciidamada Shisheeye, taas oo la sheegay in ay soo gaartay waxyeelo xoogan.
Qaraxa labaad oo isna ku diyaarsanaa goob aan sidaas kaga fogeyn halka uu ka dhacay qaraxa hore ayaa la sheegay in isagana lala helay ciidamo ka soo degay gaadiidka oo difaacyo ka xirtay aagga uu qaraxu ka dhacay.
Xarakada Al-Shabaab oo sheegatay mas'uuliyada qaraxyadan ayaa xaqiijisay in qaraxyadaas lagu dilay ugu yaraan 3 askari, laguna dhaawacay 7 kale, iyagoona tilmaamay in booyadu ay waxyeello xoogan soo gaartay balse aysan wada burburin.
Ciidamada AMISOM ee lala eegtay qaraxyadan ayaa ah kuwa badanaa gurmadka iyo zaadka geeya xerada Maslax ee duleedka Muqdisho waxaana dhowr jeer ay la kulmeen qaraxyo noocan oo kale ah oo looga gubay gaadiid, askarna looga laayey.
Si ay uga gaashaantaan khasaaraha joogtada ah ee ka soo gaaraya wadadaas xalay saqbarkii ayay qaadeen gurmadka oo ay geeyeen xerada Maslax balse saaka markii ay dib u soo noqdeen ayaa lala helay weeraradii ay ka xeeladeysanayeen.
Dhanka kale, Ciidamada AMISOM ayaa iyagoo careysan si indha la'aan ah rasaas ugu furay dadka shacabka ah ee ka ag dhawaa goobta waxaana la sheegay in ay rasaasta ku dhinteen ugu yaraan afar ruux oo shacab ah sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Dhageyso: 30 katirsanaa Ciidamada dowladda oo isku dhiibay Wilaayada Islaamiga Sh/dhexe.
5 Askari Oo Lagu Dilay Qarax Ka Dhacay Shabeellaha Hoose.
Dad Shacab ah oo ku dhintay Weerar ka dhacay deegaan katirsan Sh/dhexe.
Al Shabaab oo sheegatay Mas'uuliyadda Weeraro ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud.